अरविन्द आश्रमले के गर्‍यो यी शिक्षिकालाई ? खुल्यो रहस्य - Sutra News
अरविन्द आश्रमले के गर्‍यो यी शिक्षिकालाई ? खुल्यो रहस्य
काठमाडौं- अरविन्द आश्रमले आफूलाई झुटो आरोप लगाएर फसाउन खोजेको भन्दै एक शिक्षिकाले न्यायको अपिल गरेकी छिन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिक्षिका यशोधा विश्वकर्माले आफूलाई फसाउन खोजेको बताएकी हुन् । दुई सयभन्दा बढी असहाय बालबालिकाका लागि शिक्षादीक्षा दिँदै आएको अरविन्द आश्रमले आफूलाई झुटो आरोप लगाएर फसाउन खोजेको उनको भनाइ छ ।
६ वर्षदेखि आश्रममा कार्यरत शिक्षिका विश्वकर्माले निर्दोष र अवोध बच्चाको विषयमा आफूलाई चोरीको आरोप लगाइएको बताइन् । आश्रममा कोही आफन्त नभएको आकाश भन्ने बालकलाई माया गर्दा प्राध्यापकलगायत कसैलाई मन नपरेकोले आफूमाथि झुटा आरोप लगाएर आश्रमबाट निकाल्न खाजेको उनले स्पष्ट पारिन ।
नौ वर्षीय बालक आकाश नेपालीलाई आफूसँग भेट्न पनि नदिएको बताउँलै उनले भनिन्, ‘आश्रममा स्वामीको बहिनीको दुई लाख बढी पैसा चोरेको आरोप आकाशमाथि लगाएर म माथि अन्याय गरियो ।’ उनले आफू निर्दोष रहेको बताइन् । यशोधाले भनिन्, ‘आकाशले पैसा चोरेर मलाई पैसा राख्न दिएको अभियोगमा धेरै डर, धम्की दिइयो । तर, म निर्दोष छु, मलाई बच्चाले पैसा राख्न दिएको छैन ।’
उनले बच्चाहरुको सानो गल्तीमा पनि प्रिन्सीपल लगायतले कुट्ने गरेको समेत आरोप लगाइन् । बच्चाहरुलाई पिसाले भिजेको ओच्छानमा सुताइने गरेको भिजेको ओच्छानमा सुताइने गरेको, बच्चाहरुलाई पिट्ने गरेको भन्दै आफू गएपछि बच्चाहरुले नयाँ जीवन पाएको उनको भनाइ थियो ।
आफन्तको बच्चा भएमा राम्रो गर्ने तर आफन्त कोही नपरेमा केयर नगर्ने पनि उनले बताइन् । ‘बच्चाहरुलाई जुम्रा परेर बिजोग हुन्छ । धेरैपटक मैले बच्चाहरुको कपाल खौरेको छु,’ विश्वकर्माले भनिन्, ‘आकाशको खाना झिकेर खाएको आरोपमा प्रिन्सीपलले कुटेर दाँत समेत खुस्केको थियो ।’
उनले आश्रमका बच्चाहरुमाथि धेरै कुटपिट हुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘बच्चाहरुले सामान्य काम बिगार्दा पनि बेस्सरी कुटाई खान्छन् ।’ आफूले धेरै पटक बच्चाहरुलाई नकुट्न आग्रह गरेको समेत उनले बताइन् । विश्वकर्माले आश्रमका बच्चाहरु प्रिन्सिपल लगायत केही कर्मचारीहरुको छाया देखेर पनि डराउने गरेको बताइन् ।
प्रकाशित :भाद्र २९, २०७८ मंगलवार - १८:१९:१३
# अरविन्द आश्रम